Apple Kubhadhara kunowedzera muIndia nekufamba kusingatarisirwi | IPhone nhau
Apple Pay ndeyechokwadi iyo yakanakisa isina kutaurirana nzira yekubhadhara iwe yaunogona kuwana nhasi. Vaya vedu vakajaira havachanzwisise kukosha kwekutora kiredhiti kadhi. Kunyangwe zvipingamupinyi zviri kusangana neCompertino system kuSpain kuti ikure zvakanaka.
Zvisinei, zviri pachena kuti Apple inochinjika mumisimboti yayo zvichienderana nemusika urimo. Zvikuru zvekuti kuIndia ivo vari kugadzirira kubatanidza Apple Kubhadhara neakasiyana madhijitari mawallet ayo atovepo munyika nechinangwa chekuwedzera yavo isingabatanidzi yekubhadhara sevhisi nekukurumidza.
Izvi zvinoita kuti tishamisike kuti nei kuSpain, "nyika yekutanga" nyika, tichine bhanga chairo rekufananidza makadhi edu neApple Pay (Banco Santander) kunyangwe hazvo takazivisa kuti imwe inozivikanwa seCaixa ichasvika kumagumo gore Bank. Izvi zvinopesana zvakanyanya nenzira yekuwedzera yaanoda kushandisa muIndia, kwaanoda kusiya iyi yakavharwa system musimboti. kupihwa mune mamwe marudzi edhijitari wallets kungovapo mumusika uri kusimuka, kwavasina Apple tsika, kure nazvo, asi vane chinangwa chekuhwina chero zvodii. Simba rine simba rinopa mari sekutaura kwechiCastilian.
Iwo makambani ari kurwa hondo inotyisa yekumanikidza maitiro avo ekubhadhara munyika yakatemerwa kuti ive simba guru, kunyangwe iri iro rine vanhu vazhinji pasirese. Iva sezvazvingaite, nepo masisitimu akadai seBizum neVerse achiramba achitarisa Apple Pay kubva kure kuSpain, kuIndia ivo vachatora mukana wePaytm chikuva sechimwe chinhu chekushambadzira, iniKunyangwe ivo vashandisi vasina iOS chishandiso vanozogona kushandisa Apple Pay, sezvo iwo akajairwa ekubhadhara mapuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Kubhadhara kunowedzera muIndia nekufamba kusingatarisirwi
Uber yakagadziridzwa ichibvumira isu kuti pakupedzisira tibate iyo GPS